Ny MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias Lighting System - Jiro MediaLight Bias
Home Ny rafitra hazavana MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias
Tsindrio hanitarana Tsindrio ny teomina
Ny rafitra hazavana MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias
Mitahiry hatramin'ny $100.00 Save $100.00
Vidiny tany am-boalohany $119.95
Vidiny tany am-boalohany $119.95 - Vidiny tany am-boalohany $399.95
Vidiny ankehitriny $299.95
product.variants.choose_variant MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Version - $ 89.95 MediaLight Pro 20 "(51cm) Kavina" Fixture "henjana - $ 97.95 MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 santimetatra) Strip (5v USB Powered) - $ 262.95 MediaLight Mega Pro 5 metatra (197 santimetatra) 12v (tsy mifanaraka amin'ny USB) - $ 299.95
MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Version MediaLight Pro 20 "(51cm) Kavina" Fixture "henjana MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 santimetatra) Strip (5v USB Powered) MediaLight Mega Pro 5 metatra (197 santimetatra) 12v (tsy mifanaraka amin'ny USB) Version
Ny MediaLight Pro:
Ny jiro bias D65 CRI 99 antsika ho an'ny tsy fitoviana sy tsy fitoviana tsy manam-paharoa
Azafady mba mariho: Raha tsy mpandoko loko matihanina ianao dia mety maniry ilay Mk2 Series fa tsy.
Raha ny marina, na dia mpandoko loko matihanina aza ianao, dia mety ho izany no tadiavinao Mk2 Series. Ny chips Mk2 dia kely kokoa ary mahomby amin'ny angovo, ary ahafahantsika mamorona tady lava kokoa tsy misy fihenan'ny herinaratra azo jerena Ny Mk2 Series vaovao dia manakaiky ny zava-bitan'ny Pro ho an'ny 1/3 amin'ny vidiny. Raha ny marina, avy amin'ny TLCI, dia manome isa 99 amin'ny 100 izy ireo.
Ny andian-tsarimihetsika MediaLight Mk2 dia manana CRI an'ny C98 Ra. Ny fahombiazana dia tena mitovy amin'ny Pro sy Mk2, na dia eo am-pampiasa emitter akaiky-violet aza ny MediaLight Pro. Io dia mampihetsika ny spike-emitter spike eo ambanin'ny zavatra hitan'ny mason'olombelona (ny ankamaroantsika, na izany aza). Ny SPD sisa dia miteraka fitoviana manaitra amin'ny tara-pahazavana D65, mazava ho azy fa tsy misy hazavana infrared. Na izany aza, tahaka ny vokatray rehetra, tsy izahay mihitsy no milaza fa D65 ny vokatray. Mampiasa ny teny hoe "D65 simulated" izahay noho ny fahasamihafana miharihary eo amin'ny tara-masoandro sy ny jiro LED.
Eto amin'ny 2020 dia tsy marina ny fiantsoana ny hazavana namboarina tsy hain'ny masoandro. Azontsika atao ny mamaritra ny firafitry ny kintana simika amin'ny kintana lavitra miaraka amin'ny spectrophotometers ary azontsika atao tsara ny milaza ny tara-masoandro avy amin'ny loharano LED.
Fa maninona ianao no nanao jiro bias bias CRI 99 mba hanazavana fotsiny ny volondavenona miloko somary malalaka?
1) Satria vitantsika izany.
2) Satria mino izahay fa ho eo ny teknolojia LED mpanjifa ao anatin'ny taona vitsivitsy.
3) Satria raha misy olona hanao an'io aloha, dia fantatray fa mety ho izahay koa. ¯ \_ _ (ツ) _ /Ā
Ny MediaLight Pro 20-inch dia manao tsy ampidiro lavitra (ny dimmer dia eo amin'ny tariby). Izany dia tsy mety amin'ny fampisehoana mitaingina rindrina. Aleo kosa mampiasa ny MediaLight Verso Pro. Mbola mitohy ny 5v 1a, USB 3.0. Tafiditra ao anatin'izany ny «dimmer» sy ny «remote».
Miroso ihany anefa ny teknolojia, ary azontsika antoka fa ao anatin'ny 18 volana ho avy, ny vokatra mahazatra rehetra eto amintsika dia hanana CRI farafaharatsiny 98 Ra sy TLCI an'ny 99. (Fanamarihana tamin'ny taona 2020: efa niseho tamin'ny tsipika Mk2 antsika io ary naharitra 20 volana).
The MediaLight Pro dia noforonina ho an'ireo mpandoko loko izay mila ny CRI avo indrindra sy ny fitsinjaram-pahefana tsy mitovy amin'ny spectral indrindra amin'ny jiro bias ho an'ny fampisehoana matihanina. The Pro mampiasa kilasy vaovao iray manontolo ColorGrade ™ Chip SMD (LED), ampiasain'ny motera foton-violet akaiky, ary misy index index rendering miloko (CRI) 99 Ra (TLCI 99.3 Qa). Ny MediaLight Pro dia tsy hitovizany amin'ny mazava amin'ny mason'ny olombelona.
Karazan-jiro bias vaovao tanteraka izy io, ampiasain'ny sokajy SMD (LED) vaovao vaovao.
Ny mason'olombelona dia mahita halava lava indrindra eo anelanelan'ny 400-700 nanometatra. Ny fiolahana fizarana herinaratra (SPD) ho an'ny MediaLight Pro dia nanambara fa raha tokony ho ilay spike manga mahery vaika hita ao amin'ny rafitra LED fotsy nentim-paharazana, ny herin'ny motera foton-violet dia milatsaka ao anatin'ny faritry ny subperceptual.
Ny ankabeazan'ny rafitra jiro LED entona dia milatsaka amin'ny sanda R9 sy R12, izay tsy tafiditra ao anatin'ny kajy CRI, fa ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny lokon'ny hoditra sy ny mena mena. Matetika izy ireo dia soloina fôtôlôra mavesatra be dia be kokoa, ary fôtôro maitso mora vidy kokoa, izay mety hiteraka loko miloko maitso, na dia ampiasaina hanazava ny volondavenona aza, toy ny jiro fiangarana. Ankoatry ny motera photon violet, izay manala ny "spike blue", Ny MediaLight Pro mampiasa fangaro manokana ny phôleôra izay ahitana ireto mena tena ilaina ireto, izay miteraka SPD malefaka kokoa sy hazavana voajanahary kokoa.
Miaraka amin'ny fanondroana fandokoana loko (CRI) an'ny 99 Ra (TLCI 99.3 Qa) sy ny CCT an'ny 6500K, ny MediaLight Pro no rafitra fanaovan-jiro bias mifanaraka amin'ny D65 mandroso indrindra ankehitriny.
Mikatona izy io. Izy io dia azo ampandehanana amin'ny seranan-tsambo USB 2.0 na USB 3.0 amin'ny monitor anao matihanina, ary vidiny 1/3 ny vidin'ny jiro avo lenta an'ny CRI avo lenta, izay tsy dia marina loatra.
MediaLight Pro Toetoetra:
6500K CCT (Temperature loko mifandraika)
CRI 99 Ra (TLCI 99.3 Qa) Chip ColorGrade ™ SMD (LED)
Jiro 50 malefaka malefaka na fantsona fantsom-boasary henjana - mety tsara ho an'ny mpanara-maso matihanina 24 "
Ny 4m Verso Pro dia handeha manodidina ny lafiny efatra amin'ny fampisehoana 60 ", na handrakofana ny lafiny 3 (havia, ambony sy havanana) amin'ny fampisehoana hatramin'ny 85"
Tady fanitarana USB 4ft - azo alefa amin'ny port USB 2.0 na USB 3.0 amin'ny fampisehoana na solosainao
Misy dimmer PWM
Herin'ny USB 5v
Kitapom-pandefasana tariby tafiditra amin'izany
Peel ary atsofohy adhesive fametrahana 3M VHB
5 Year Limited Garantie
4.7 Miorina amin'ny 10 Reviews
Manorata Review Mametraha fanontaniana
Ahoana ny fomba niainanao tamin'ny ankapobeny?
Misaotra anao tamin'ny fandefasana famerenana iray!
Mankasitraka indrindra ny fampidiranao. Zarao amin'ny namanao mba hahafahan'izy ireo mifaly!
Voalohany, avereno jerena ity zavatra ity
SortMiaraka Amin'ny Sary farany indrindra Highest Rating Rating ambany indrindra Mahasoa izao
Hamafa ny sivana
Sokajy misimisy kokoa
Tena tsara :) Misaotra :)
MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 santimetatra) Strip (5v USB Powered)
I manampy izany? 0 0
fohy dia kely amin'ny vola be
MediaLight Pro 20 "(51cm) Kavina" Fixture "henjana
I manampy izany? 1 3
Jiro amin'ny MediaLight Bias
Manolotra safidy maro maharitra sy mora kokoa amin'ny TLCI 99 izahay raha te-hikaboka lava kokoa na vidiny ambany. Ny halavan'ny MediaLight Pro 51 cm dia hita amin'ny famaritana ny vokatra sy ny anaran'ny vokatra. Ny LED ampiasaina ao amin'ny MediaLight Pro dia anisan'ireo LED marina indrindra natao tamin'ity habeny ity (SMD5360), ary lafo be ny vola azo. Miala tsiny izahay raha tsy fantatrao izay novidinao na ohatrinona ny vidiny.
Toa tsara. Tiako.
Mora ny manangana ary manatsara ny fanamboarana fanovana avy hatrany!
MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Version
Veloma ny vidiny
Araka ny doka. Ampiasaiko eo ambadiky ny monitor misy loko misy ahy Dolby 4220 ity. Mamirapiratra fotsiny hanazava ny rindriko aoriana tsy miandany.
Noheverinao vao haingana
Novana vao haingana